Wareeysigii lala yeeshay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo weli xabsi guri ah ugu jira dowladda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wareeysigii lala yeeshay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo weli xabsi guri ah ugu jira dowladda Soomaaliya
Wargeyska Toronto Star ayaa lagu soo daabacay wareeysi dhowr bilood ka hor lala yeeshay hogaamiyihii hore ee ururka xisbul islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys, islamarkaana ka mid ahaa hoggaamiyaasha kooxaha Islaamiga ah ee ka jiray dalka Soomaaliya.
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hore wax kasoo asaasay ururkii Al-itixaad, golihii maxkamadaha islaamka iyo ururkii xisbul islaam ayaa wareeysiga lala yeeshay hal-ku dhig looga dhigay:- “Kulankii aan la yeeshay argagixiyihii lagu illaabay gudaha dalka Soomaaliya”, waxaana wareeysigaasi la qaaday dhowr bilood kahor muddadii ay xilalka haayeen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa sanadkii 2013-ka isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna weli ku xiran yahay xabsi guri ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho, halkaas oo uu kula nool yahay xaasaskiisa iyo 28 caruur ah ee uu dhalay.
Saxafiyadda wareeysiga ka qaaday Sheekh Xasan Daahir Aweys oo lagu magacaabo Michelle Shephard islamarkaana ka tirsan wargeyska Toronto Star ayaa sheegtay inay tahay markii labaad ee ay wareeysato Sheekh Daahir Aweys, iyadoo wareysigeedii hore la yeelatay xilligii ay golaha maxkamadaha islaamka maamuli jireen magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobaladda Koonfurta Soomaaliya.
Sheekh Xasan Daahir oo mar wax laga wedyiiyey muddadii uu ka tirsanaa ururkii Xisbul Islaam iyo Al-shabaab dhacdooyinkii uu sameeyey ayuu sheegay inay aheyd qaddiyad sax ah go’aankaasi, wuxuuna xusay inay dhinaciisa iyo dowladdaba dileen dad rayid ah, waa sida uu hadalka u yiri.
Wuxuu Sheekh Xasan Daahir sheegay inuu taageersan yahay Al-shabaab, balse uusan ka mid aheyn, isagoona dhinaca kale tilmaamay in isaga iyo Al-shabaab ay isku caddow u ahaayeen dowladda Soomaaliya, taasi oo keentay inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka lagula jiray dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale, Sheekh Xasan Daahir ayaa tilmaamay inuu farqi weyn u dhexeeyo ka tirsanaanta iyo taageeridda Al-shabaab, isagoona carabka ku adkeeyay inuu taageeray oo kaliya balse uusan weligiis ku biirin ururka Al-shabaab.
Dhinaca kale, Sheekh Xasan Daahir oo mar wax laga weydiiyey inuu Daacish taageersan yahay iyo inkale ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo inay dalka Soomaaliya ka dagaalamaan, islamarkaana uu hoggaamiyaha Daacish yahay mid si iskiis ah isku magacaabay.
Sidoo kale, Sheekh Xasan Daahir Aweys oo mar wax laga weydiiyey inuu ka tanaasulay fikirkii uu haystay 10 sano ka hor, ayaa ku jawaabay “Iyada ayaa go’aan ka gaari karta arrintaasi”.
Ugu dambeyntii, Michelle Shephard oo ah wariyaha wareeysiga ka qaaday Sheekh Xasan Daahir Aweyn ayaa sheegtay in sababaha loo soo maxkamadeyn la’ yahay Sheekh Xasan Daahir ay tahay isagoo kasoo jeeda beesha Hawiye, islamarkaana laga baqanaayo hadii xukun dil lagu xukumo inay dilkiisa ay dhibaato ka dhalato.